Ellicott Dredges Manampy manampy 2,300 km ao amin'ny Water Water Bangladesh - Ellicott Dredges
Tetikasa fanofana drakitra dia nanampy renirano fitetezana 2,300 kilometatra fanampiny ho an'ny rafitry ny renirano Bangladesh tao anatin'izay taona maro lasa izay.
Ao amin'ny 2012, taorian'ny fandraisana an-tanana vaovao nataon'ny governemanta Bangladesh, Ellicott nanomboka nanome dredges mankany amin'ny Bangladesh Inland Waterway Transport Authority (BIWTA) sy ny Bangladesh Water Development Board (BWDB). Tao anatin'izay folo taona lasa izay dia nividy «dredge» 32 ireo fikambanan'ny governemanta roa ireo ka ny antsasany dia dredge Ellicott. Anisan'izany ny fifangaroan'ny Series 1270 18-inch Dragon®, Series 1870 20-inch Dragon®, ary ny dredger an'ny Super Dragon ™ an'ny Series 3870 26-inch. Ny dredge marika Ellicott® voalohany dia natolotra ny governemanta Bangladesh, fantatra amin'ny anarana hoe East Pakistan tamin'izany fotoana izany, tamin'ny 1963.
Raha heverina ho fomba lafo indrindra amin'ny fitaterana entana sy olona, ​​ny làlambe dia zava-dehibe ho an'i Bangladesh, izay voarakotry ny delta renirano lehibe indrindra eto ambonin'ny tany. Sahabo ho 30% amin'ny firenena no mipetraka ambany latsaky ny 2 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina, ary rehefa miakatra ny haavon'ny ranomasina dia mameno ny lalan-drano ny sedimentation, mitarika fikatonana sy tondra-drano.
Ellicott 20-inch Dragon® dredge sary etsy ambony
Ny singa Ellicott folo (10) farany teo dia notokanan'ny praiminisitra tamin'ny 6 Mey Sheikh Hasina. Tamin'ny hetsika fitokanana dia nanokana sambo an-dranomasina maherin'ny 100 ny praiminisitra anisan'izany ireo dredger suction cutter an'ny Ellicott. Ny singa Ellicott vaovao dia manatevin-daharana mpanao dredger tsy miankina miasa manerana an'i Bangladesh.
Ny hetsika dia fankalazana ny fahaizan'ny dredging vaovao nataon'ny governemanta saingy fotoana iray ihany koa hanamarihana ny tantara lava momba ny fitrandrahana tany Bangladesh. Ny rain'ny praiminisitra, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, no praiminisitra voalohany mpanorina an'i Bangladesh ary tamin'ny taona 1970 dia nitondra trondro fito (7) tany Bangladesh izy; ao anatin'izany ny dredges marika Ellicott® vitsivitsy. Nanampy ny praiminisitra Hasina fa ny fanodinana tany Bangladesh dia tsy noheverin'ireo nanana fahefana teo anelanelan'ny 1975 sy 1996.
Noho ny tsy fisian'ny fikojakojana, fananganana ary sedimentation voajanahary, dia mety ho sarotra ny fitetezana ny lalan-drano ao Bangladesh. Miaraka amin'ny fanampian'ny Ellicott Dredges, Bangladesh dia manana 5,900 3,865km misy lalan-drano azo aleha mandritra ny main-tany, raha tsy 2005km fotsiny izany tamin'ny XNUMX.
Kitrokely Ellicott 2070 Dragon® miasa ao Bangladesh
Ny fahafantarana ny tombo-tsoa azo avy amin'ny fitrandrahana anaty tany dia nanokana renivohitra lehibe hiarovana ny toe-draharaha tokana ao Bangladesh ny praiminisitra. Nasongadiny fa mila dredge 500 ny firenena amin'izao fotoana izao ho an'ny fivezivezena, ny fanajariana ny tany ary ny fifehezana ny tondra-drano.
Ny governemanta Drafitra Delta 2100 manitatra ity fandaharam-potoanan'ny dredging ity ary miantoka ny ho avin'ny loharanon-drano ary mikendry ny hanalefaka ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro sy ny loza voajanahary. Nankatoavina tamin'ny volana septambra 2018, drafitra maharitra izy io izay mampiditra ny fanovana sy ny fidirana an-tsehatra ilaina mba hahatonga ny Delta Bangladesh ho azo antoka, hambinina ary hafana amin'ny toetr'andro amin'ny 2100.